What is e-learning system? | Global Connect Asia
What is e-learning system?
ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းများ / သင်တန်းများ / တက္ကသိုလ် တွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြတဲ့ e-learning system ဆိုတာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ electronic devices များမှ တဆင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပညာသင်ကြားရေး software platform တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသား တစ်ယောက်ချင်းစီက မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ own comfort place ကနေ သင်ယူလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက် အခုလို Covid-19 epidemic ကာလအတွင်းမှာ Private School များ Education Centers များအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ ကျောင်းသားများ ပညာရေးနောက်ကျမှုမရှိဘဲ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခုလို ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေသာမက ဆရာ/ဆရာမ များ / management team များအတွက်ပါ အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ e-learning system ကို provide လုပ်ပေးနေတဲ့ #GCA ရဲ့ #odoo_elearning#software_platform လေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့် !!!!!!!
GCA ရဲ့ odoo e-learning system မှာ ပါဝင်တဲ့ features တွေကတော့…..
ဆရာ/ဆရာမ များက မိမိတို့သင်ကြားလို့သော course များ content များ PDF file များကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်ပြီး ကျောင်းသားတွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ level တစ်ခုချင်းစီအလိုက် channel တစ်ခုချင်းစီခွဲ၍ software platform ပေါ်မှာ ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
live streaming ဖြင့် ကျောင်းသားများကို face to face သင်ကြားမည် ဖြစ်ပြီး သင်ကြားမှု ပြီးဆုံးပါက နေ့အလိုက် သင်ခန်းစာများကို video upload လုပ်ထားမည်ဖြစ်၍ ကျောင်းသားများသည် အချိန်မရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများ အနေဖြင့်လည်း သင်ခန်းစာများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ခြင်း / video file များ Document များကို sharing လုပ်နိုင်ခြင်း။
သင်ခန်းစာပြီးဆုံးတိုင်း သက်ဆိုင်သော external links များကို mention ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်သားများ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတစ်ယောက်ချင်းစီက ကျောင်းသားတွေ၏ နားလည်နိင်မှုကို သိနိုင်ရန် video file တစ်ခုပြီးတိုင်း Quizzes များ ဖြေဆိုခိုင်းခြင်း / answers များ နှင့် viewer list များကို check လုပ်နိုင်ခြင်း / time set up လုပ်နိုင်ခြင်း။
ကျောင်းသားများ အနေဖြင့်လည်း video file တိုင်းကို feedback များ rating သတ်မှတ်ချက်များ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျောင်းသားများ၏ အရည်အချင်း စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် အပါတ်စဉ် / လစဉ် မိမိစိတ်တိုင်းကျ customize question types များ series များ ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး pass or fail remarks များကို mail မှ တစ်ဆင့် certificate ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ scoresအလိုက် profile တွင် badges များပေးနိုင်ခြင်း ။ ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးနော်!!!
အခြား perfect ဖြစ်တဲ့ featuresတွေ #GCA ရဲ့ #e_learning_software မှာ အများကြီးကျန်သေးတယ်နော်…..
နိုင်ငံတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကကျသော အခြေခံအုတ်မြစ်မှာ နိုင်ငံ့အတွင်း ပညာတတ် လူတန်းစားများစွာ မွေးထုတ်နိုင်ရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားလာဖို့အတွက်လည်း များစွာအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီတော့ digital ခေတ်ကြီးမှာ လူကြီးမင်းတို့ ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍ အဆင့်မြင့်မားလာဖို့အတွက် #GCA ၏ #e_learning_software နှင့်အတူ လက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက #GCA sales team ကို Phoneဆက်၍ ဖြစ်စေ ၊ meeting appointment ယူ၍ဖြစ်စေ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ #GCA ၏ service team မှလည်း ဖော်ရွေစွာဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ Business တွက် solution guideline ပေးဖို့ စောင့်ကြိုနေပါတယ်ရှင်။
အခုလို covid ကာလကြီးမှာ GCA နှင့် လက်တွဲထားသော Company ကြီးများသာမက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးက မိဘပြည်သူများလည်း ရောဂါကင်းဝေးကြပါစေလို့ GCA Company မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Ph: 09964404011, 0973142903
What is E-commerce and why should we use?